बैतडी जिल्लामा प्रहरीको तपाँईका मास्क खोई ? अभियान | सुदुरपश्चिम खबर
बैतडी, १७ वैशाख
बैतडीमा प्रहरीले तपाँईको मास्क खोई ? अभियान सञ्चालन गरेको छ । कोरोना भाईरसको संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहेकाले स्वास्थ्य मापदण्डका बिषयमा नागरिकलाई सचेत बनाउन यो अभियान सञ्चालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक किशोरसिंह ऐरीले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रले संयुक्त रुपमा सो अभियान सञ्चालन गरेको उहाँले बताउनुभयो । सडकमा बिना मास्क भेटिएका नागरिकलाई सम्झाई बुझाई गर्दै निशुल्क रुपमा मास्क वितरण समेत गर्ने गरिएको प्रहरी निरीक्षक ऐरीले जानकारी दिनुभयो ।
अहिले सम्म दुई सय बढी नागरिकलाई निशुल्क रुपमा मास्क वितरण गरिसकिएको बताइएको छ । कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि भौतिक दुरी कायम गर्ने, मास्क लगाउनुपर्ने र साबुपानीले मिचिमिचि हात धुनुपर्ने कुरा नागरिकलाई जानकारी दिईरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य मापदण्डको परिपालन गर्न सबैलाई आग्रह गर्दै जिल्लाभरी तपाँईको मास्क खोई ? अभियान सञ्चालन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । कोरोना भाईरसबाट बच्नका लागि अनावश्यक रुपमा हिडडुल नगर्न समेत प्रहरीले आग्रह गरेको छ । (ninglashainionline बाट सभार)